टर्कीमा भूकम्पमा परि मर्नेको संख्या ११६ नाग्यो उदार कार्य जारि अजै निकै सम्पार्क बिहिन – Krazy NepaL
टर्कीमा भूकम्पमा परि मर्नेको संख्या ११६ नाग्यो उदार कार्य जारि अजै निकै सम्पार्क बिहिन
November 4, 2020 460
एजिएन समुद्री क्षेत्रमा गत साता गएको विनाशकारी भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या बुधबारसम्ममा ११६ जना पुगेको टर्कीका उद्धारकर्मीहरुले बताएका छन् । टर्कीका अधिकारीहरुले एजमिर शहरका भत्किएका भवनमा खोज तथा उद्धार कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएका छन् । टर्कीको तेस्रो ठूलो शहर एजमिरमा पीडित दुई जना मारिएका थिए । ग्रीकेली द्वीप सामोसमा दुई किशोरको मृत्यु भएको थियो ।
टर्कीको विपद तथा आपतकालीन व्यवस्थापन निकायले एजमिरमा १७ मध्ये १५ वटा ठूला भवन नराम्रोसँग भत्किएका र तिनीहरुमा खोज तथा उद्धार कार्य सकिएको जनाएको छ । उक्त निकायले एक हजार ३५ जना घाइते भएका र १३७ जना अझै अस्पतालमा उपचार गराइरहेको बताएको छ ।
मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि राष्ट्रपति रिसेप तायिप एर्डोगानले अन्तिम क्षणसम्म खोजी र उद्धार कार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उद्धारकर्ताहरुले भूकम्प गएको ९० घण्टापछि भत्किएको घरबाट एक जना ३ वर्षीया बालिकालाई जीविकै उद्धार गर्न सफल भएका थिए ।
अमेरिकी भौगर्भिक सर्भेले भूकम्प ७.० म्याग्नीच्यूडको गएको जनाएको छ । उक्त भूकम्पको धक्का राजधानी इस्तानबुल र ग्रीसको राजधानी एथेन्स समेत पश्चिम टर्कीको ठूलो क्षेत्रमा अनुभव गरिएको थियो । गत शुक्रबारको पहिलो भूकम्प पश्चात एक हजार ७०० भन्दा बढी पटक परकम्प गइसकेका छन् । तीमध्ये ४ रेक्टरभन्दा ठूला ४५ पटक परकम्प गइसकेका छन् ।
Prevआफूले पदबाट राजिनामा दिए देश बर्बादीतिर धकेलिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई
Nextपुर्व अधिराज कुमार धिरेन्द्रको छोरीको प्रेमीसँग रोमान्स गरेको फोटोहरु भाईरल
मृत्युअघि मानिसलाई यमराजले देखाउने ४ संकेत
सुगर, पा’यल्स जस्ता स ‘मस्या भएकाले किन करेला खानुहुदैन,? जानी राखौं ।
कुन बार जन्मिने महिला र पुरुष हुन्छन् सबैभन्दा धनी र भाग्यमानी ? यस्तो रहन्छ स्वभाव